Bit By Bit - The ramangwana - 7.2.2 mukwikwidzi zvakatinakira date muunganidzwa
Data muunganidzwa Nzira vekare, izvo muongorori, hunokuita havasi kuenda kubasa sezvo tsime digitaalinen zera. Mune ramangwana, tichanyatsoongorora kugovana zvakatinakira kusvika.
Kana iwe uchida kuunganidza dhora mumakore ezvijitori, unofanira kuziva kuti uri kukwikwidza nguva yevanhu uye kutarisa. Nguva uye kutarisa kwevadzidzi vako zvinoshamisa zvikuru kune iwe; iyo ndiyo yakasvibiswa yekutsvakurudza kwako. Mazhinji masayendisiti masayendisiti akajairira kugadzira tsvakurudzo yevasiri captive populations, zvakadai sevanodzidza zvidzidzo pasi pekambani yebsbs. Mune zvirongwa izvi, zvinodiwa zvemuongorori anotonga, uye kufara kwevatori vechikamu hakusi chinhu chakakosha. Mukutsvakurudza kwemakore-yemakore, nzira iyi haisi yakasimba. Vatori vechikamu vanowanzova kure nechekare kubva kuvatsvakurudzi, uye kushamwaridzana pakati pezviviri kunowanzopindirana nekombiyuta. Izvi zvinoreva kuti vanotsvakurudza vari kukwikwidzana kwevatori vechikamu uye naizvozvo vanofanira kusimbisa ruzivo rwakawandisa. Ndicho chikonzero muchitsauko chimwe nechimwe chaisanganisira kubatana nevatori vechikamu, takaona mienzaniso yezvidzidzo zvakatora nzira yekutora dhiyabhorosi.
Somuenzaniso, muchitsauko 3, takaona kuti Sharad Goel, Winter Mason, naDuncan Watts (2010) vakaita sei mutambo unonzi Friendsense iyo chaiyo yakanga yakangwara yakapoteredza kuongorora kwemaonero. Muchitsauko 4, takaona kuti iwe unogona sei kuumba dambudziko rakasiyana-siyana rekushandisa nekugadzira miedzo iyo vanhu vanoda chaizvo kuva nayo, zvakadai sokunyora mimhanzi yandakaita naPeter Dodds naDuncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Pakupedzisira, muchitsauko 5, takaona kuti Kevin Schawinski, Chris Lintott, neboka reGalaxy Zoo vakaita sei kubatana kwakawanda kwakakurudzira vanhu vanopfuura 100 000 kuti vabatane mune imwe nyanzvi (mune zvose mazwi ezwi) basa rekuisa mazita (Lintott et al. 2011) . Mune imwe neimwe yezviitiko izvi, vatsvakurudzi vakataura nezvekuumba ruzivo rwakanaka kune vatori vechikamu, uye mune imwe neimwe, nzira iyi inotora chikamu ichi inobatsira maitiro matsva ekutsvakurudza.
Ndinotarisira kuti mune ramangwana, vatsvakurudzi vacharamba vachivandudza nzira dzekuunganidza deta dzinoedza kuumba mukana wakanaka wevashandisi. Yeuka kuti muzera re digital, vatori vechikamu vako vari kumwe chete kubva pane vhidhiyo yeja ye skateboarding.